नेपाल आइडलको ग्रान्ड फिनाले आज - LiveMandu
नेपाल आइडलको ग्रान्ड फिनाले आज
को बन्ला दोस्रो नेपाल आइडल ?
काठमाडौं । केही हप्ता अघिमात्र द भ्वाइस अफ नेपालको फिनाले भएको थियो । जसबाट सि.डि.बिजय अधिकारी पहिलो द भ्वाइस अफ नेपाल बन्न सफल भए । त्यसैगरी अर्को सांगितिक रियालिटि शो नेपाल आइडल सिजन २ को ग्रान्ड फिनाले आज शुक्रबार पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसको मैदानमा हुँन गइरहेको छ । पहिलो संस्करण कतारमा गरिएको थियो, त्यस समयमा प्राविधिक समस्याले लाइभ हेर्न पाइएको थिएन । तर आजको फाइनल एपि वान, युटुवबाट एकैसाथ प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । पहिलो नेपाल आइडल पोखराका बुद्ध लामा भएका थिए ।
उपाधिको लागि बिक्रम बराल, सुमित पाठक, अस्मिता अधिकारी र रवि ओड फाइनलमा पुगेका छन् । दर्शकहरुको भोटको आधारमा आज दोस्रो नेपाल आइडल छानिनेछन् । देशका विभिन्न ठाँउमा आफनो मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई जिताउन विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन भएका छन् । को बन्ला त दोस्रो नेपाल आइडल निकै अत्सुकताको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि नेपाल आइडलको आजको फाइनलको लागि लिएर निकै अनुमानहरु गर्न थालिएको छ । हेरौ कस्ले प्राप्त गर्नेछन दर्शकहरुको अत्यधिक साथ । ग्रान्ड फिनालेको सफलताको लागि नेपाल आइडल परिवारलाई शुभकामना ।
Tags: Asmita AdhikariBikram BaralGrand FinaleKathmanduliveNepal idolRavi odhSumit Pathak
एसइई परीक्षा चैत १० गते देखि
दीर्घ दमखोकी (सीओपीडी) व्यवस्थापनको अनुसन्धान सुनसरीमा हुँदै
बिग ब्यास लिगमा सन्दिपको धमाकेदार सुरुवात
गाउँपालिकाले छोरीको नाममा रु. १०००० सहित खाता खोलिदिने
5 proven tips that will help you fall asleep faster
शाह वंश र कास्कीको सम्बन्ध
उसको नाम निशा